Israa’il oo wada qorshe ay ku Baaliranayso dhulka Danta Galbeed. – Geelle Magazine
Home » Wararka Warbixino
Israa’il oo wada qorshe ay ku Baaliranayso dhulka Danta Galbeed.
ahmedzaki Posted On April 27, 2020
Ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa kalsooni ka muujiyey in Mareykanka uu laba bil gudahood ku siin doono fasax ay Israel ugu dhaqaaqdo qorshe ay ugu darsaneyso qeybo ka mid ah Daanta Galbeed.
Falastiiniyiinta ayaa carro ka muujiyey qorshaha Israel ay kusii kordhisaneyso dhulka ay ku qabsatay dagaalkii Bariga Dhexe ee 1967-kii.
Netanyahu, oo ku dhowaaqaya heshiis lagu soo dhisayo dowlad wadaag ah oo kala dhaxeysa ninka la loolamay ee Benny Gantz, ayaa toddobaadkii hore u qabtay 1-da July in la billaabo wada-xaajoodka Golaha Wasiirada ee lagu ballaarinayo dhulka ay dal ahaan u sheegato Israel, ayada oo lagu soo darayo qeybo ka mid ah deegaanada Yahuudda ee Daanta Galbeed, iyo aagga Dooxada Jordan.
Tallaabadan ayaa u baahan inay ogolaato Washington, sida ku cad heshiiska Netanyahu iyo Gantz.
Khudbad uu Video ahaan ugu jeediyey urur Kirishtan ah oo taageera Israel kuna sugan Yurub, ayaa Netanyahu waxa uu Axaddii sheegay in qorshaha nabadda Bariga Dhexe ee uu bishii Janaayo soo jeediyey madaxweyne Trump uu ballan-qaadayo aqoonsashada deegaanada Yahuudda ee Daanta Galbeed inay yihiin dhul Israel.
“Waxaan ku kalsoonahay in laba bil kadib ballan-qaadkaas laga dhabeyn doono,” ayuu yiri Netanyahu.
Saraakiisha Falastiiniyiinta weli kama jawaabin hadalka cusub ee kasoo yeeray Netanyahu.
Falastiiniyiinta ayaa si aad ah u diiday qorshaha nabdda Trump, sababtoo ah waxa uu inta badan Israel u sharciyeynayaa dhulkii ay ku qabsatay dagaalka, oo ay ku jiraan dhammaan deegaanada Yahuudda ee ay dhistay, taasi oo ah wax Israel ay raadineysay tobaneeyo sano.
Xogahayaha Arrimaha Dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Arbacadii sheegay inay tahay arrin Israel u taalla inay ku darsato qeybo ka mid ah Daanta Galbeed, islamarkaana Washington ay si khaas ah aragtideeda arrintaas ku aaddan ula wadaagi doonto dowladda cusub ee Israel.
Somalia: Tiradi ugu badnayd oo maalin gudaheed u geeriyootay COVID19.